Kanjani ukuqala injector abandayo kahle?
Winter - yisikhathi ekhohlisayo iningi unyaka abashayeli mhlawumbe. Phela, ngaphezu kweqhwa nezimo ezinzima ukushayela, ngezinye izikhathi imoto akunakwenzeka ukwenza. Futhi akunandaba, kungcono carburetor injini noma injector. Ibhayisikobho inkinga enjalo sonke sibhekana, ngisho abanikazi izimoto ezintsha. Futhi namhlanje sizokutshela ukuthi ukuqala injector e frost ngezindlela ezihlukahlukene.
Esinye sezizathu okungenzeka kakhulu ukuthi imoto ngokuzumayo wenqaba ukuqala, - iphutha kule uhlelo nophethiloli. Kungaphawulwa izici eziningana:
izinga Kubi kukaphethiloli. Ukuze ngokoqobo yethu kuba impela into evamile. Nokho, uma ingxenye enkulu uphethiloli kokuqukethwe amanzi, kungangena kakhulu ukusebenza kohlelo amafutha kanye imoto iyonke.
injector Angcolisiwe noma fuel zokuhlunga. Bobabili izakhi ngezikhathi ukuthambekela ukuheha futhi zimunce ukungcola, ngakho isimo sabo njalo kunesidingo ukuze ulandele futhi okungenani kanye njalo amakhilomitha 5000 nokuhlola.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ingcindezi kaphethiloli imigqa noma fuel futha ukungasebenzi. Futhi, uhlelo kungavela laphinde labhidlika futhi kakhulu uphethiloli ingcindezi Regulator.
Ingxenye olungalungile emoyeni kuhlangana ngophethiloli (fuel-air ingxube). Lokhu kungase signal ye a avimbekile lemifanekiso air noma okuyiphutha mpintsha. Kungase kwenzeke ukuze yokugcina ashisa ongaphakeme nje simisiwe odakeni.
Futhi, abampofu motor ukuziqalela kungadala yokucasha ebusika ohlelweni ukuthungela. Into yokuqala ukuhlola icala battery - ivame ukuba angachithwa okwamanje ezingalindelekile kakhulu. Kungaba inkinga abacathama amakhandlela uphethiloli ezazigcwele. Kulokhu, kufanele babe abangane unscrewed futhi somile iyiphi indawo ashisayo. Ngaphansi ngokuvamile, ukwehluleka itholakala okhathazekile isikhathi ukusatshalaliswa izigaba noma kokucindezelwa isilinda.
Kanjani ukuqala injector emakhazeni yi "Ukulekelela"?
Le ndlela akuhlangene ne usikilidi imoto elula. Konke lula kakhulu - le ndlela kuhilela ukuqala injini omlilo usebenzisa ebhethri elishajekayo lomunye imoto. Kanjani ukuqala injector emakhazeni? Ukuze ugweme ashisiwe, electronic control unit, okwabangela inhlekelele kuze kube ama-ruble ayizigidi 50, kumelwe banamathele imithetho ekhethekile:
Ngokusebenzisa lolu kwethulwa imoto indlela, ayikwazi ukusetshenziswa ngokuqinile nakrutku noma ukujoyina izintambo ngesandla. Izintambo kufanele abe Ukugunda ekhethekile, kungenjalo kungenzeka ukuthi ngemva "Ukulekelela" enjalo ushise ibhethri noma uvala wonke umshini ibhodi inethiwekhi.
Akufanele kube kakhulu igesi ngalesi sikhathi, kusukela ephakeme ijubane injini generator ukufuthelana kakhulu.
Ngaphambi kokuba uqale injector emakhazeni, sinake ikhwalithi kwemihlambi izintambo - akufanele babe imifantu noma ezinye deformations ngaphandle.
Phawula polarity of the kwakwakhe. Uma uhlanganise i-"plus" ukuze "lokususa", imiphumela ingase ibe okufanayo njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala ukugoqa.
Ngemva siqala injini, ukuvumela izimoto ukusebenza Ngohlelo imizuzu 2-3. Laphaya ezansi ukuze, kuqala unqamule ezikhumulweni lokususa, plus-ke.
Abanye abashayeli belulekwa ngaphambi kokuqala play for imizuzwana of izibani bacwilisa 20, bese ujike ukhiye ukuthungela. Ngalesi senzo, thina vusa ibhethri ezinye izinqubo zamakhemikhali, kanye ngesikhathi umqulu ukuziqalela ibhethri isivele isimo eshubile.
Indlela ukudala i injector "nge pusher"?
Le ndlela imoto kwethulwa kusho ngokwayo, umshini wakho kufanele uqale kakade sendleleni. Kuyinto ngokwanele ukuze bakwazi ukucela othile omakhelwane push imoto yakho.
Ngaphambi kokuthi usitshele izici zalesi ukukhuleka, siphawula ukuthi kufanelekile kuphela izimoto nge ukudluliswa mathupha. Uma une automatic transmission, le injector emakhazeni, ungenza izindlela ezimbili kuphela kuchaziwe ngenhla.
Ngakho yini okumele ngiyenze? Okokuqala, umshini ungaphakathi igiya lwesithathu, khona-ke hlala phansi beshayela, nomakhelwane wakho uqala ibenze imoto phambili. Uma sekudlule 5-6 amamitha, ungavula ngokuphepha ukhiye ukuthungela. Prakthiza ebonisa ukuthi le ndlela isebenza ngisho ngebhethri flat.
Nokho, abanye bakholelwa ukuthi indlela odlule kumele kusetshenziswe esengumphostoli wokugcina. Okokuqala, abashayeli Kunconywa ukuba bazame 'ukukhanya' kusuka kwenye umshini noma usebenzise uketshezi ekhethekile ukuqala abandayo isiqalo injector isikhathi.
Qaphela ukuthi indaba kokuqala lungasetshenziswa for uphethiloli izimoto. Kulokhu, ikhava lemifanekiso air isuswe futhi uketshezi injected singene carburetor.
On umjovo izinjini okusebenza ngokuhlukile kancane. Kanjani ukuqala injector emakhazeni kulesi simo? Lapha, uketshezi kokuqala kungenziwa injected singene ezininginingi emoyeni. Kodwa ngaphambi kubalulekile ukususa tube zokuhlunga. Ngemva yokufeza imisebenzi ye umjovo uxhumano ifakwa emuva endaweni.
Ngemva kwalokho, zizwe ukhululekile ukwenza run injini. Ezimweni eziningi, le ndlela futhi ewusizo kakhulu, kodwa "nomlilo nje", khumbula isimiso imoto ukuqala-up "nge pusher".
Ngakho sasisuke kungani ungaqali injector emakhazeni, futhi kanjani ukusebenzisa injini imoto ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi ngezindlela ezahlukene. Khumbula bona silula, bona ilula.
Vaz-2114 - heats injini: imbangela kanye nokulungiswa. Thermostat Vaz-2114
I-Nekrasov, "Izingane Ezihluphekayo": ukuhlaziywa nesifinyeto somsebenzi
Kwenzekani uma intelligence ezisemkhathini vakashela ngempela umhlaba wethu?
Umfutho wegazi 140 kuya ku-100: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Umlando Umninimuzi inoveli UMargarita Bulgakov yothando e